Itoobiya oo wajahaysa khilaafka Yurub ee Doorashad iyo kan Suudaan ee xadka. – Xeernews24
5. Mai 2021 /in WARAR/NEWS /von admin
Waxaa banaanka usoo baxay khilaaf xoogan oo u dhaxeeya Midowga Yurub iyo dowlada Itoobiya, khilaafkan ayaa ka dhashay sida kormeerayaal ka socda Midowga Yurub ula soconayaan doorashada baarlamaanka ee June ka dhaceysa Itoobiya.
Midowga Yurub ayaa go’aansaday in ay joojiyaan kormeereyaal ay u diri lahaayeen doorashada baarlamaanka Itoobiya oo la filayo in 5-ta bisha June ee sanadkan ka dhacdo dalka Itoobiya kadib khilaaf arintaasi ka dhashay.
Afhayeen u hadashay Midowga Yurub oo lagu magacaabo Nabila Massrali ayaa shaaciyay in Midowga Yurub joojisay in kormeerayaal u dirto doorashada Itoobiya, waxa ayna xustay in labada dhinac isku fahmi waayeen sida ay u howlgalayaan kormeerayaasha.
Nabila Massrali ayaa Warbaahinta u sheegtay in Dowlada Itoobiya ay diiday inay buuxiso shuruudaha gundhigga u ah geynta kormeereyaasha goobaha doorashooyinka, oo ay ku jirto madax-bannaanida ergada.
“Waa wax laga xumaado in Midowga Yurub aanu heli damaanad-qaadkii lagama maarmaanka u ahaa astaamaha dimoqraadiyadda ee loo fidin lahaa shacabka Ethiopia. Hufnaanta kormeereyaasha doorashada ayaa udub-dhexaadka midowga Yurub” ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay Midowga Yurub
Dowlada Itoobiya ayaa dhawaan ka biyo diiday in howlgalka Midowga Yurub uu gudaha Itoobiya la yimaado qalab isgaadhsiineed oo u gaar ah oo ay ku jiraan telefoonada satellite-ka, waxa ayna dowlada sheegtay goob kasta oo doorasho laga heli karo hab isgaadhsiineed oo hoosyimaada nidaamka Isgaadhsiinta Qaranka.
Dhanka kale waxaa sii xoogeystay,
Waxaa sii xoogeesanaya khilaafka u dhaxeeya dowladaha dariska ah ee Sudan iyo Itoobiya oo isku haya xadka dalkaasi iyo sidoo kale biyo xidheenka muranka badan dhaliyay ee ay dhistay Xukuumada Adis Ababa.
Wasaarada Arimaha dibadda Sudan ayaa dhawaan sheegtay in hadii Itoobiya ka baxdo heshiisyada biyo xidheenka in Sudan ay sheegan doonto lahanshaha gobolka Benishaangul-Gumuz oo ah goobta laga dhisayo biya xidheenka weyn ee Itoobiya.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Diina Muftii oo Warbaahinta la hadlay ayaa wax laga xishoodo oo sharciga iyo nidaamka baalmarsan ku tilmaamay in Sudan sheegato Gobolka Benishangul Gumuz.
Diina Muftii ayaa sidoo kale sheegay dowlada Sudan in ay wado dhaq dhaqaaqyo abuuraya xasilooni daro, waxa uuna ku eedeeyay in ciidamada Sudan qabsadeen dhul ay leedahay Itoobiya ayna halkaasi ka geesteen dhac iyo dhibaatooyin kale.
“Suudaan iyada oo dhul ay Itoobiya leedahay xoog ku qabsatay haddana iney bayaanno aan munaasab ahayn ay soo saarto, Itoobiya si dhow ayey ugu kuur galeysay. Ciidamada Suudaan oo dhac iyo bililiqo ka wada dhulka Itoobiya ee ay qabsadeen iney u dulqaadato ay Suudaan u aragtay daciifnimo ama cabsi.” ayuu yidhi Diina Mufti.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Diina Muftii ayaa sheegay khilaafka Itoobiya iyo Suudaan u dhaxeeya ee salka ku hayo arrimaha xadka uu wax xidhiidh ah la laheen biya xidheenka weyn ee ay Itoobiya dhiseyso.
Khilaafka dhinaca xadka ah ee u dhaxeeya dowladaha Itoobiya iyo Sudan ayaa sii kordhaya, waxaana khilaafka labada dal sare u qaaday xiisadii horey uga dhalatay biyo xireenka ay dowlada Itoobiya dhiseyso.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2021/05/Itoobia.png 235 324 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2021-05-05 12:10:002021-05-05 12:12:23Itoobiya oo wajahaysa khilaafka Yurub ee Doorashad iyo kan Suudaan ee xadka.
Odhaahda Maanta GANTAALKA SHIINAHA: SADDEX ARRIMOOD OO LA XIDHIIDHA WAX KA OGOOW